စုချစ်သူ: October 2011
၄၉နှစ် မြောက် မွေးနေ့ အမှတ်တရ
၄၉ နှစ်မြောက် ကိုမင်းကိုနိုင် (ခ) ကိုပေါ်ဦးထွန်း မွေးနေ့
၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁
ဂုဏ်သိက္ခာကို အသက်ထက် တန်ဖိုး ထားပါတယ်...
Posted by စုချစ် at 10/18/2011 08:57:00 AM2comments: Links to this post
Labels: Birthday, Remembrance
ဒီနေ့ နံနက် လွတ်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ ဦးဇာဂနာ ပုံတွေ ကြည့်ရတာ ကျန်းမာပုံရတယ်။ မျက်နှာက ကြည်လင်တယ်။ အရင်လို ရွှင်လန်းတက်ကြွနေလျက်ပဲ။ စကားပြောတာဟာလည်း ရင်ထဲကလာတဲ့အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့၊ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဟာသလေးတွေ စွက်ပြီး ပြောတတ်တုန်း၊ အဆိုးထဲက ကြံဖန်ပြီး ရယ်မောစရာ ရှာတတ်တုန်း။ ဇာဂနာလေဟာ ဇာဂနာဆီမှာပဲ ရှိတယ်။ ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ မရှိဘူး။ သူ့လေသံမျိုး ဘယ်သူမှ မပြောတတ်ဘူး။
သူဟာ အင်မတန် လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့သူ။ သူဟာ သူ့ ယုံကြည်ချက်အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒူးမထောက်၊ အလျှော့မပေး၊ အရှုံးမပေးမယ့် သူ။ အလံမလှဲ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်မယ့် ခိုင်မာ ပြတ်သားတဲ့ ကြံ့ခိုင်တဲ့ အင်အားကြီးတဲ့ အံ့ဖွယ်စိတ်ဓါတ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ။ သူ့ကို ပြန်တွေ့ရတာ ကိုယ့် အစ်ကို၊ ကိုယ့် ဆွေမျိုး တစ်ယောက်ကို ပြန်ဆုံတွေ့လိုက်ရသလို ရင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးမိတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာက ဘဘဦးနန်းညွန့်ဆွေနဲ့ ကြီးကြီးဒေါ်ကြည်ဦးတို့တော့ မရှိကြတော့ဘူး။ ရက်စက်လိုက်ကြတာ... သူများ မိသားစုတွေကို ခွဲရက်ကြတဲ့သူတွေ...။
မရွှေစုက ရန်ကုန်သူမို့လား မသိ။ မိုးရွာတာကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ မိုးရွာတာကို မြင်နေရရင် သိပ်ပျော်တယ်။ ညဖက် မိုးရွာပေးရင် အိပ်ရတာ ဇိမ်ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးရွာတဲ့ညတွေ ကိုယ်က အိပ်ရာနွေးနွေးထွေးထွေးမှာ စောင်ခြုံပြီး အိပ်နေစဉ် ထောင်ထဲမှာ နေရတဲ့ သူတွေ မိုးရွာတဲ့အခါ ဘယ်လိုများ နေပါ့မလဲလို့ ခဏ ခဏ တွေးမိတယ်။ ဦးဇာဂနာ တစ်ယောက် ဟိုတခါ သူ့ထောင် အတွေ့အကြုံတွေရေးတုန်းကလို ကြမ်းပြင် အအေးမှာများ အိပ်နေရသလား။ ရင်ထဲမှာ တွေးကြည့် ခံစားရတာ မခံရပ်နိုင်လို့ အော်ဂလီတောင် ဆန်လာမိတယ်။ အပြစ်မရှိပဲ အပြစ်ဒဏ် ခံစားနေရတဲ့ သူတွေ အကြောင်း သေသေချာချာ စဉ်းစား တွေးမိတိုင်း ရင်ထဲမှာ တော်တော်ထိတယ်။ ကိုယ့်မောင်နှမ၊ အဖေ၊ အမေ မိသားစုတွေထဲက ဒီလို မတရားချုပ်နှောင်ခံနေရရင် ဘယ်လိုခံစားကြရမလဲ ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာပြီး တွေးတော ပေးကြဖို့ ကောင်းတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုတော့ တချို့တ၀က်လွတ်လာကြပြီ။ အာဏာပိုင်များမှ မိမိကိုယ်နဲ့ နှိုင်းပြီး ကိုယ်ချင်းစာ တရားလေးများ လက်ကိုင်ထားကာ တွေးတော ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါစေ။ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံသူများ အားလုံး၊ အပြစ်မရှိသူများ အားလုံး ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ကြပါစေ မိသားစုတွေ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းနိုင်ကြပါစေလို့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ ဥပုဒ် သီတင်း သီလ ဆောက်တည်ရင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပါတယ်။
သတင်းကောင်းများ ဆက်လက် စောင့်မျှော်လျက်...
Posted by စုချစ် at 10/12/2011 07:19:00 PM2comments: Links to this post
Today, we, my hubby and I, wake up at5am early morning as always and practice the meditation, pray for the day like every other day. About7am, before my hubby is going to work, we have taken our 10th year Anniversary Photos. Every year for this day, we've always taken the couple photos for our Anniversary memory. Happily, today is the 10th time of taken the anniversary photos.
Later after he left for his work, he has to work for Saturday too while I am not, I am thinking to write something for our Anniversary in my blog or face book or in forum, in fact, I have sung one lovely song for my hubby and thinking to make the video as usual I do for his Birthday's present. But, when I opened my mail, unexpectedly, I found one mail from him, he may be sending that just before he went out this morning, I feel really so... so touched and I am with tears of joy.
People said that the tenth year of marriage celebration is the first of the major milestone anniversaries. But, I don't need the diamond or any other big celebration for Anniversary but only metta. So do I.
Here isaletter from my beloved hubby for our 10th year Anniversary day....
Happy 10th Year Anniversary of our marriage.
She litters the house with books, her paintings, drawings and brushes. She's not much for making housekeeping. She seldom does washing my clothes, doing ironing, or sewing anything.
But she's my hero.
My heroes are people who slog along, day-in and day-out, doing what they can to improve the lives of others. It's relatively easy, in my experience, to rise to the occasion to meet short-lived -- even if difficult -- challenges. But shouldering heavy loads day-in and day-out is considerably harder.
People of modest means who struggle mightily to put food on their tables and clothes on their kids' backs are my heroes. People who care for invalid relatives are my heroes. People who work in shelters (human and animal) are my heroes. People who go into troubled neighborhoods after dark to deliver food to street dwellers are my heroes.
And my wife – she -- is my hero.
She was one of those academic over-achievers. You know the type: studied hard, got good grades. Her NUS (National University of Singapore) resided inaplace so small that it had only one traffic light in its entire city.
After completingaEngineering bachelor's degree at the Rangoon Institute of Technology (RIT in Burma), she went to Singapore at National University of Singapore , first earningamaster's degree with full scholarship.
We first met at University and fell in love at Mandalay Sedona Hotel Project as she working as Design Engineer and me asaSite Engineer. And we married in Oct-2001 on the small island of Singapore and we are still living in it.
To my way of thinking, however, she is now doing the most important work of her life. Lucky me, I get to live with my wife. She always likes to bite my hand (she was born on Dog Year), but I really enjoy it.
My wife, who fills me with admiration. She isapartner andacompanion, at timesasenior staff engineer, at times likeamother,afriend or sister. But most of all she has been my best and closest comrade through all life's struggles.
My marriage has been the greatest and most precious happiness in my life. I would tell my wife that if I would to be born again, I would hope to be married to her again and again, in lifetime after lifetime, throughout eternity.
My wife knows the truth about me better than anyone, and I think I know her devotion and patience better than anyone else could. So, I would ask her if she could be there for me always. But maybe this sounds more likeahelp wanted ad, thanamessage of thanks!
Quiet mutual understanding can be fine at times, but if these emotions are expressed verbally, I am sure that the relationship betweenahusband and wife will become much richer and more fulfilling. When one speaks frankly and openly, from the heart, about the things that matter most, one freely reveals oneself, making it possible to be better understood and loved by others.
Marriage begins, after all, with two strangers thrown together. If you forget this very simple fact, you start to expect more and more from your partner, and this can lead to dissatisfaction and eventually to friction in your relationship. The bond that bringsamarried couple together must be forged so it is even deeper than the ties between blood relations. And suchabond can only be based on the depth of one's character.
I think what is necessary inamarriage are very ordinary things like care and consideration. Just like the sun, rising from the east every day, something ordinary and constant is always necessary in life. There is no instant magical formula toagood marriage. I think our relationship is in some ways built on very ordinary foundations.
I call my wife "Lieutenant," because she is always giving me advice and cautioning me about various matters. Women tend to be more practical than men, and view everything with the strength ofarealism rooted in daily life. No man can matchawoman's keen intuition to see through to the essence of things, her depth of wisdom and her ability to take calm action.
My wife often worries about my health and my tendency to overwork. It has been wonderful for me to have her watching attentively over me all these years, and seeing her smile often made me feel better than any medicine.
And she is so optimistic that she often amazes me. She says "I've learnedalot, having gone with you through many hardships. And I've come to the point where I am never taken by surprise now, no matter what happens."
I can't describe in words whatapositive influence her smile has had on me, particularly at times when I was exhausted or stressed from work. She says that while most people considerasmile the result of happiness, she seesasmile as the cause of happiness.
Our life together has not been easy. I have been devoting myself toastruggle to createanew age in which human life and happiness are valued above all. It has not been an ordinary life, and every day has been turbulent and eventful. Somehow, the more hardships we faced, the more we could strengthen our bond as comrades, as human beings, and asacouple. Everyday the bond between us gets deeper and deeper. And I know it will continue to deepen forever.
I have tried to write poems about my wife, but often when we look at each other, we start to laugh, or she starts to scold me. However, I will end by sharingapoem that I’m going to give my wife on this 10th year anniversary fall on 08-Oct-2011 :
Openinganew path together with you, My inseparable support and companion.
This song is from him too....
Thanks for reading it....
Ko Yay Chan + Ma Shwe Suu
Posted by စုချစ် at 10/08/2011 05:50:00 PM 10 comments: Links to this post
စတိဗ်၊ ဘီလ် နဲ့ ဘ၀ အကြောင်းတရားများ
ဒီနေ့ မနက်စောစော ရုံးရောက်လို့ သတင်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ခုက ကျမကို ဆီးကြို နှုတ်ဆက်လို့နေတယ်။ ပန်းသီးရဲ့ ဖခင်ကြီး စတိဗ် ဂျော့ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ ၅ရက် မနေ့ညမှာ ကွယ်လွန်သွားပြီး ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ပန်းသီးကနေ product အသစ်တစ်ခု တီထွင်လိုက်တိုင်း သုံးစွဲသူများ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရန် စတိတ်ခ်ျစင်ပေါ်မှာမြင်ရလေ့ရှိတဲ့ စတိဗ်ဂျော့ရဲ့ ပုံရိပ်ဟာ တစ်ခါထက် တစ်ခါ ကျန်းမာရေး ပိုညံ့လာပုံရတာ၊ စိတ်ဓါတ်ကမာလို့ စိတ်ဆောင်ပြီး ဟန်ပန်အမူအရာ နဲ့ မျက်နှာအနေအထားမှာ အင်အားရှိနေဆဲလို့ ထင်ရပေမယ့် ရုပ်ခန္ဓာအရ အင်အားနည်းနေပုံရှိနေတာ သတိထားမိခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ၂၀၁၁ သြဂတ် ၂၄ မှာ ပန်းသီးရဲ့ အကြီးအကဲ အဖြစ် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း ကြေငြာတာကို ဖတ်ရတော့ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး တစ်စုံတစ်ရာ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်နေပြီနဲ့တူတယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက သတင်းဓာတ်ပုံတွေမှာ သူ့ရဲ့ ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ကြောင်း ကြေငြာပြီးနောက် သူ့အမျိုးသမီးရဲ့ ပခုန်းကို မှီထားလိုက်တာကို မထင်မှတ်ပဲ တွေ့လိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်း ပိုဖြစ်မိခဲ့ပါတယ်။
၂၀ရာစုခေတ်ကြီးရဲ့ ထူးခြားပြောင်မြောင်လွန်းတဲ့ ပါရမီရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ဘီလ် ဂိတ်နဲ့ စတိဗ် ဂျော့ တို့ ရှိတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကျမအနေနဲ့ လူလာဖြစ်ရတာ တနည်းအားဖြင့်တော့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မနေမနား ရူးသွပ်စွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နည်းပညာတွေ၊ လူသားတွေရဲ့ လူနေမှု ဘ၀ အနေအထား အဆင့်အတန်းတွေဟာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် တိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒီ ပါရမီရှင် နှစ်ယောက်ဟာ ၁၉၅၅ ခုနှစ် တစ်နှစ်ထဲ ဖွားတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သို့သော် ပါရမီရှင် ဆိုတာတွေ တူကြပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဘ၀ကံ အကြောင်းတရားတွေကတော့ မတူညီကြပါဘူး။
ဘီလ် ဂိတ် က upper-middle-class မိသားစုက မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပြီး သူ့မိဖတွေဟာ ပညာတတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ချစ်ခင်ဖွယ်ရာ မိသားစုများနဲ့ ငယ်ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာ ကြီးပြင်း လာခဲ့ပုံရပါတယ်။ စတိဗ်ကတော့ ပညာမတတ်တဲ့ မွေးစား မိဖများရဲ့ လက်အောက်မှာ သူ့ငယ်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ မွေးစားမိဖများက သူ့ပညာရေးအတွက် အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်ခဲ့ပုံတော့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စတန်းဖိုဒ့် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားက ကျောင်းသားတွေကို သူပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ မွေးစားမိဖများရဲ့ စုငွေအားလုံးနီးပါးကို သူ့ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအတွက် သုံးမိရက်သား ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဘီလ် နဲ့ စတိဗ်တို့ရဲ့ တူညီတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး တက္ကသိုလ် ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မတက်ခဲ့ကြပါဘူး။ စတိဗ်ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ သူတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘ၀ နေစရာ အခန်းမရှိလို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အခန်းကြမ်းပြင်မှာ အိပ်ခဲ့ရတာတွေ၊ Coke ပုလင်းအခွံတွေကို စုပီး ပြန်ရောင်းကာ စားစရိတ် ရှာခဲ့ရပုံတွေ၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းကို တလံတဖျားသွားပြီး ထမင်းအလကား သွားစားရပုံတွေ စသဖြင့် သူ့ငယ်စဉ်ဘ၀ရဲ့ ကဗျာမဆန်ခဲ့ရပုံတွေ၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲ ကြပ်တည်းခဲ့ပုံတွေ၊ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဲသလို အခြေအနေမျိုးကနေ ဒီနေ့ ဒီလို အခြေအနေထိရောက်အောင် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိအောင် သူဘယ်လို ကြိုးစား တက်လှမ်းခဲ့ရတာတွေကို လူငယ်များ အတုယူနိုင်ဖွယ် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကံ ကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်ဖို့ မိမိကိုယ်ကိုယ်သာလျှင် အားကိုးရာလို့ ပြောပြခဲ့တဲ့ စတိဗ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စတိဗ် ဘ၀ဟာ နိမ့်တုံ မြင့်တုံ ဖြစ်နေတဲ့ လှိုင်းတံပိုး တစ်ခုကို ကြည့်ရသလိုပဲလို့ ကျမခံစား ထင်မြင်မိပါတယ်။ သူ့ဘ၀ကို နားလည်အောင် ဖတ်ရတာဟာ လောကဓံ ဆိုတာ ဘာလဲ လို့ နားလည်အောင် သင်ယူနေရသလိုပါပဲ။ သူမွေးဖွားလာတော့ မိဖရင်းလက်ထဲကနေ မွေးစားမိဖ လက်ထဲ ရောက်သွားတယ်။ ပညာတော်တဲ့ စတိဗ်ဟာ တက္ကသိုလ်ကိုတော့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းပြီးအောင် မတက်ပဲ သူဝါသနာပါရာ တီထွင်ချင်တာကို အပင်ပန်း ဆင်းရဲခံ အားစိုက်ခွန်စိုက် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်တယ်။ အသက် ၂၀လောက်က သူ့ မိဖတွေရဲ့ ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ သူ့ တီထွင်မှုဟာ ၁၀နှစ် အတွင်းမှာ ဒေါ်လာ သန်း၂၀၀၀ထောင်တန်တဲ့ ၀န်ထမ်း ၄၀၀၀ ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သူ့ ရဲ့ ဘ၀မှာ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ရှိသွားစေတဲ့ လှိုင်းအထက်က ပထမဆုံးသော အောင်မြင်မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စတိဗ်ဟာ သူ အသက် ၃၀အရွယ် ၁၉၈၅ခုနှစ် မှာ သူစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီက အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီး အလုပ်လက်မဲ့ ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူ့ဘ၀တစ်ခုလုံးပုံပြီး စိုက်လိုက်မတ်တတ် လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အလုပ်ကနေ အပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လောက်များ ကြေကွဲ တုန်လှုပ်လိုက်မလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်စရာတောင် မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စတိဗ်က အဲသလို ဆုံးရှုံးမှုကနေ သင်ခန်းစာ ရအောင်ယူပြီး သူ့ဘ၀ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက နာကြင်ကြေကွဲခဲ့ရသလောက် စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာစွာနဲ့ တစ်ကနေပြန်စပြီး တန်ပြန် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ချက်များဟာ ခုချိန်မှာတော့ ဟိုးတစ်ချိန် ပန်းသီးကနေ အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စဟာ သူ့ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလို့ ကြွေးကြာ်နိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာ မသေချာမှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါလား ဆိုတာ ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး သူသိသွားခဲ့ပါတယ်။
ဘီလ်ဂိတ်ကတော့ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ရင်းပြီး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် လောကဓံကို ထူးခြားစွာ မကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူချမ်းသာ တစ်ယောက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ထက် အပ်နဖားပေါက်လေးထဲကို ကုလားအုတ်တစ်ကောင် ၀င်နိုင်ဖို့က ပိုပြီးလွယ်သေးတယ် လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘီလ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် စွမ်းဆောင်ချက်များဟာ အံ့မခန်း အတုယူချင်စရာများပါ။ ကျမတို့ရဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိစတ္တသာရာဘိဝံသ က မိန့်ကြားတော် မူဖူးပါတယ်။ ရပ်ရမယ့် အချိန်ကို သိကြပါတဲ့။ ဘီလ်ဟာ ၂၀၀၀ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလမှာ မိုက်ခရိုဆောဖ့်ရဲ့ အကြီးအကဲ အဖြစ်က နှုတ်ထွက်ပြီး Bill & Melinda Gates Foundation ကို တည်ထောင်ခဲ့ကာ လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းတွေကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဝင် ၀ါရံဘဖက်နဲ့ လက်တွဲပြီး ကမ္ဘာတ၀ှန်းလုံးက လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အလှူဒါန ပြုဖို့ ကမ်ပိန်းတွေလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလောက က ကိုယ့်လေးစားကြည်ညိုမှုကို အသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူး။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အရင် လုပ်ပြီးမှ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ဆန်းစစ်ဖို့ လောကကြီးက ပိုမျှော်လင့်တယ်၊ လူတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုလျှင် မနေမနားအလုပ်လုပ်ရမယ်။ အောင်မြင်တဲ့အထိ အပြင်းအထန် ကြိုးစားရမယ်။ ကိုယ်က ဥာဏ် ရှိရမယ်။ ကိုယ့်ဥာဏ်ကိုလည်း ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ ဆိုတာသိတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖို့ ကိုယ်လိုချင်တာကို ရဖို့မလွဲပါဘူး။ အပြင်းအထန် မကြိုးစားတဲ့လူ တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ ကံပေးလို့ရတာတို့၊ ဘယ်နတ်ဘုရားက စောင်မ ပေးလို့ ရတာ ဆိုတာမျိုးတွေကို ကျွန်တော်လုံးဝမယုံပါဘူး လို့ ဘီလ်က ဘ၀နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အောင်မြင်စေကြောင်း အချက်အနေနဲ့ ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကို ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူဟာ သူပြောတဲ့ အတိုင်း ကျင့်ကြံနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
စတိဗ်အကြောင်းပြန်ဆက်ရရင် ပန်းသီးကနေ အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ စတိဗ်ဟာ မနေမနား ကြိုးစားအားထုတ်မှု စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာမှုတွေကြောင့် ၁၉၉၇ခုနှစ် မှာ ပန်းသီးရဲ့ အကြီးအကဲ ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တီထွင်နိုင်မှု၊ ၀န်ထမ်းများကို နိုင်နင်းစွာ အုပ်ချုပ်တတ်မှု၊ လူတွေ ဘာကို ကြိုက်တတ်မလဲဆိုတာ ကြိုတင် သိတတ်နိုင်မှု၊ အပြင်လောကကြီး ဘာလိုချင်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်း တွေးဆတတ်မှု၊ နည်းပညာပိုင်းတင်သာမက အနုပညာပိုင်းမှာပါ လှပစွာ ဖန်တီးနိုင်မှုတို့ကြောင့် ပန်းသီး ထုတ်ကုန်များဟာ သူမတူအောင် ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ဘ၀မှာ ဒုတိယအကြိမ် လှိုင်းထိပ်ကို ပြန်လည်တက်ရောက်ခဲ့ပြန်တာပါပဲ။ သူပြောခဲ့တဲ့ ဘ၀အောင်မြင်မှု သြ၀ါဒကတော့ (Stay Hungry... Stay Foolish...) ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပါ... အရူးထပါ...တဲ့။
သူ့ကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ပုတ်ထုတ်လိုက်ပြန်တဲ့ လှိုင်းတစ်ခုရဲ့ အစကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ သရက်ရွက် (Pancreas) အကြိတ်ဖြစ် နေတာကို စတင် သိရှိခဲ့ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဆရာဝန်တွေက သူ့ကို ၃လ ကနေ ၆လအထိပဲ ခံတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းချင်တော့ ဒါဟာ ခွဲစိတ် ကုသလို့ ရတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ခဲ့တယ်။ စတိဗ် က အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုရင် ...
''No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it.''
''ဘယ်သူမှ မသေချင်ပါဘူး။ ကောင်းကင်ဘုံကို သွားချင်တဲ့ သူများတောင်မှ အဲဒီကို ရောက်ဖို့ မသေချင်ကြပါဘူး။ သို့သော်လည်း လူတိုင်းဟာ တစ်နေ့တော့ သေကြရမှာပါ။ ခုထက်ထိ သေခြင်းတရားကို လွန်ဆန်နိုင်တဲ့သူ ဆိုတာ မရှိသေးပါ''
လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ သူဟာ အသည်းအစားထိုးကုသမှု ကို ထပ်မံ ခံယူခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
“နေ့တိုင်းကို သင့်ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ရင် တစ်နေ့မှာတော့ အဲဒီ အတိုင်း ဖြစ်လာဖို့ သေချာပါတယ် ”
ဆိုတဲ့ စကားကို သူ ၁၇နှစ်သားကတဲက ဖတ်ခဲ့ဖူးလို့ မှတ်မိနေတယ်လို့ စတိဗ်က ပြောဖူးပါတယ်။
ဘ၀အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချရာမှာ အရေးကြီးဆုံး အထောက်အပံ့ ကရိယာအဖြစ် ကျနော်တွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ သေခြင်းတရားဟာ လက်တကမ်းမှာပဲ ရှိတယ်လို့ သတိချပ်ခြင်းပါ လို့ ပြောခဲ့တဲ့ စတိဗ်ဟာ သူ့ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီပီ တရားတော်နဲ့ အညီ အစဉ်အမြဲ သတိရှိနေမယ်လို့ ကျမတော့ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး နိဂုံးချုပ်ရရင် ဘီလ်ဟာ သူ့နည်း သူ့ဟန်နဲ့ သူ့ဘ၀ကို တည်ငြိမ်အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်တည်ငြိမ်စွာ အဆုံးသတ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူ စံပြ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ စတိဗ် ကတော့ သူမွေးဖွားလာကတဲက အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး သူ့ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း အဆင်ပြေခြင်း မပြေခြင်းများ အောင်မြင်ခြင်း ရှုံးနိမ့်ခြင်းများ တစ်လှည့်စီ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ပန်းသီး အဖွဲ့ကနေ မမျှော်လင့်စွာ ကန်ထုတ်ခြင်း ခံရဖူးတဲ့ စတိဗ်ဟာ အဆိုးထဲက အကောင်းအနေနဲ့ ဒီဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်ဟာ သူ့ဘ၀အားဆေးဖြစ်စေခဲ့ပြီး ပိုမို အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့လို့ နောင်တစ်ချိန်မှာ အဲဒီနေရာကို ခေါင်းမော့လျက် ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာနိုင်ခဲ့သလို အခုလည်း အချိန်မတိုင်ခင် လောကကြီးထဲကနေ သူ့ကို ဆွဲခွာထုတ်ဖယ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ စတိဗ်ဟာ သေခြင်းတရားကို ရဲရဲရင့်ရင့် မကြောက်မရွံ့ တည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီလို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို တခြားသူတွေထက် ပိုတွေ့ကြုံရတဲ့သူဟာ တရားရကြဖို့ ပိုပြီး လွယ်တယ် ... ဆိုတာကတော့ ငြင်းလို့ မရနိုင်တဲ့ အမှန်တရားလို့ ယုံကြည်မိပါရဲ့။
စတိဗ် ငြိမ်းချမ်းပါစေ။ စတိဗ် ငြိမ်းချမ်းပါတယ်။
၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁
Posted by စုချစ် at 10/06/2011 05:44:00 PM7comments: Links to this post
Labels: Remembrance, Thoughts
ရုန်းတော် လွှတ်တော် (ကိုအောင် ၊ စုချစ်)
New York က မောင်လေးကိုအောင် (Gersing Aung) နဲ့ ရှေးခေတ်ဟောင်းမြန်မာစုံတွဲ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ရုံးတော် လွှတ်တော် သီချင်းလေးကို ခံစားသီဆိုထားပါတယ်။
ဒီ သီချင်းလေးကို တေးရေးဆရာ ဆရာကြီးစန်းသော်တာက ရေးစပ်သီကုံးခဲ့ပြီး ဘဘအေ၀မ်းဦးတင်မောင်နဲ့ အမေဒေါ်မေရှင်တို့က မူလ သီဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုတော် အောင်ရင်+ မေဆွိ၊ စည်သူလွင်+ ဟေမာနေ၀င်း၊ ဗညားဟန်+ စိုးစန္ဒာထွန်း တို့က ဆန်းသစ်လှပစွာ ပြန်လည် သီဆိုထားကြပါသေးတယ်။
မောင်လေးကိုအောင်သီဆိုထားတဲ့ မြန်မာသီချင်းများနဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းများကို သူ့ရဲ့ YouTube Channel (http://www.youtube.com/gersing) မှာ အားပေးရှုစား နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ ကိုအောင်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းများထဲမှ မရွှေစု အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ရည်စူးသီဆိုထားတဲ့ မချစ်စု ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နားဆင် အားပေးကြပါအုံးနော်...။
Posted by စုချစ် at 10/03/2011 09:31:00 AM4comments: Links to this post